नेपालको संविधान दिल्लीमै बनेको पुष्टि भयो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:०९ English
नेपालको संविधान दिल्लीमै बनेको पुष्टि भयो
पम्फा भुसाल, माओवादी नेतृ
० शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने भयो नि तपाईंहरुको विरोधले केही लछारेन ?
– शान्ति प्रकृया के हुन्छ, भविष्यले निर्धारण गर्ला । जनमुक्ति सेनाको विघटन र विर्सजन सकियो अब ।
० तपाईंहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
– शान्ति सम्मानजनक होस् किनकि शान्तिका इस्युहरु जनमुक्ति सेनाका विघटन विर्सजन, क्यानटोनम्यान खाली गर्नु या हतियारको कन्टेर खाली गर्नु होइन, नेपालमा जनमुक्ति सेना पनि थिएन, हतियार पनि थिएन तर नेपालमा दस वर्ष जनयुद्ध भयो । यसका वस्तुगत कारणहरु थिए । आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, लैगिक र क्षेत्रीय असमानता थिए । ती सबै असमानतालाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
० तपाईंले उठाउनु भएका यी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न दलहरु तयार भइसके नि ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । जनताका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा सदस्यहरु तयार छन् । तर त्यही वैदेशिक शक्तिहरु र उनीहरु चलाउने केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरु जनताको भावना र आकांक्षाअनुकरुपको संविधान नल्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने आभाष चाहिँ भइरहेको छ ।
० अझै पनि षड्यन्त्र सम्भव छ र ?
– नेपाली जनता आन्दोलन गर्ने आन्दोलन उत्कर्षमा पु¥याउने र आन्दोलनका उपलब्धिलाई
२३ चैत्र २०६८, बिहीबार १२:३६ मा प्रकाशित